PSJTV | नोकिया नाइन अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट स्मार्टफोन !
आइतबार, २७ चैत २०७३ पिएसजे न्युज
नोकियाको बहुप्र्रतिक्षित नोकिया नाइन स्मार्टफोनका विषयमा लामो समेयदेखि विभिन्न खाले अनुमानहरु गरिँदै आएका छन् । यद्यपि कम्पनीले यो नामबाट कुनै स्मार्टफोन ल्याउने बारेमा आधिकारिक रुपमा केही बताएको छैन । अहिले यो अनुमानित स्मार्टफोनका बारेमा अन्य केही जानकारीहरु पनि सार्वज्निक भएका छन् । यदि यी खबर सत्य सावित भएमा नोकिया नाइन बजारमा उपलब्ध अहिलेसम्मका स्मार्टफोनमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट स्मार्टफोनमध्ये एक हुने पक्का छ ।
ल्यपष्ब एयधच ग्कभच को रिपोर्ट अनुसार उक्त स्मार्टफोन एन्ड्रोइड ७.१.२ नगटमा चल्नेछ । यसमा ५.५ इन्चको क्यूएचडी ओएलइडी डिस्प्ले रहनेछ, जसको रिजोलुसन १४४० गुणा २५६० पिक्सेल हुनेछ । यसमा स्नापड्रागन ८३५ प्रोसेर सँगै ६ जिबीको र्याम हुने बताइउको छ ।
प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि
नेकपा विधानबाट साम्यवाद गायब !
काठमाडौं : विभिन्न सार्वजनिक बस तथा माइक्रोबसका यात्रुको नगद, मोवाइल, गरगहना चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न ७७ जनालाई विभिन्न स्थान र समयमा प्रहरीले पक्राउ गरि सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा ...